ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးအုန်းဝင်း ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့တွင် ကျင်းပသော အာရှဒေသ သစ်တော ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Asian Forest Cooperation Organization-AFoCO) ဝန်ကြီးများ အဆင့်အစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက် | MONREC
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးအုန်းဝင်းသည် အာရှဒေသသစ်တော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Asian Forest Cooperation Organization-AFoCO) နှင့် ကိုရီးယားသစ်တောဌာန (Korea Forest Service-KFS) ၏ ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့မှ (၃၁) ရက်နေ့အထိ ကိုရီးယားနိုင်ငံ၊ ဆိုးလ်မြို့ လိုတေးဟိုတယ် (Lotte Hotel) တွင် ကျင်းပသော အာရှဒေသသစ်တော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Asian Forest Cooperation Organization-AFoCO) ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးနှင့် အာဆီယံ-ကိုရီးယားဝန်ကြီးများအစည်းဝေးများသို့ ကိုရီယားနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးဉီးသန့်စင်၊ သစ်တောဉီးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်တို့နှင့် အတူ တက်ရောက်ခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၃၀) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပသော အာရှဒေသသစ်တော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Asian Forest Cooperation Organization-AFoCO) ဝန်ကြီးများအဆင့် အစည်းအဝေးတွင် မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် ရန်ပုံငွေနှင့် နည်းပညာကူညီထောက်ပံ့မှုများအတွက် အာရှဒေသသစ်တော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (AFoCO) ကို အထူးကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း၊ သစ်တောများ ထာဝစဉ်တည်တံ့ရေးနှင့် စနစ်တကျအသုံးပြုရေးသည် မိမိတို့အတွက်သာမက မိမိတို့၏ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် အထူးအရေးကြီးပါကြောင်း၊ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင် အာရှနှင့် ပစိတ်ဖိတ်ဒေသတွင်းနိုင်ငံများတွင် သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်အတူ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ လျော့နည်းဆုံးရှုံး လာလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့်အတူ နောက်ဆက်တွက် အကျိုးဆက်အဖြစ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်း၊ သဲကန္တရဖြစ်ထွန်းခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ လျော့ပါးလာခြင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးန္တရာယ် အမျိုးမျိုးတို့ကို ရင်ဆိုင်ကြရလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမှသာ ကျော်လွှား အောင်မြင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ၊ သစ်တောမူဝါဒ၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ မူဝါဒ နှင့် မဟာဗျူဟာများချမှတ်လျှက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ရာသီဉတုပြောင်းလဲမှု လျှော့ချရေး၊ သစ်တောများ ထာဝစဉ်တည်တံ့စေရေးနှင့် တောနိမ့်တောပျက်များ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း မိမိနိုင်ငံ၏ လိုအပ်ချက် ပြည့်မီရုံသာမက စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ပန်းတိုင်များ (SDG) ၊ ဘွန်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့် ပဲရစ်သဘောတူညီချက် အစရှိသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေးအတွက်ကိုပါ ရည်မှန်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ဉပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောများ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေး စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၁၈ မှ ၂၀၂၆-၂၇ အထိ) နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ နေရင်းဒေသ ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးစီမံကိန်း (၂၀၁၉-၂၀၂၀ မှ ၂၀၂၈-၂၉ အထိ) ရေးဆွဲပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းများ၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တော အတန်းအစားကျဆင်းခြင်းမှု ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု လျှော့ချခြင်း (REDD+) အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အာရှဒေသသစ်တော ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (AFoCO) ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် မှော်ဘီမြို့နယ်တွင်တည်ထောင်ထားသော သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဒေသအဆင့်ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (Regional Education and Training Centre-RETC) တွင် AFoCO အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများအတွက် သင်တန်းများ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ်ပို့ချပေးလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ AFoCO အဖွဲ့အစည်းအနေဖြင့် အနာဂတ်ကာလတွင်လည်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများ၏ သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ နည်းပညာများ၊ ရန်ပုံငွေနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကတိကဝတ်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုစေနိုင်ရေး၊ ဒေသတွင်း သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် တိုးတက်လာစေရေးအတွက် ဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးရေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၃၁) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီး ဉီးသန့်စင်၊ သစ်တောဉီးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာညီညီကျော်တို့နှင့် အတူ မလေးရှားနိုင်ငံ ရေ၊ မြေယာနှင့် သဘာဝ သယံဇာတဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး H.E. Mr. Xavier Jayakumai Arulanandan နှင့် အဖွဲ့အား Lotte Hotel Peacock အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံပြီး အာဆီယံနိုင်ငံများအကြား သစ်တောကဏ္ဍပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ သစ်တောများမှ ပံ့ပိုးပေးသော ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပိုမိုအသိအမှတ်ပြု လာစေရေး၊ သစ်တောသုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ သစ်ထောက်ခံချက် ပြုလုပ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် သတ္တုကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ကိုရီးယားသစ်တောဌာန (Korea Forest Service-KFS) ဝန်ကြီး H.E. Dr. Kim Jea Hyun နှင့် တွေ့ ဆုံပြီး မြန်မာ-ကိုရီးယား သစ်တောကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အဆင့်မြင့်တင်ရေး၊ သစ်တောကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဒေသအဆင့် ပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း (Regional Education and Training Centre-RETC) စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း နှင့် သစ်တောအတန်းအစား ကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချရေး (REDD+) လုပ်ငန်း များတိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေး၊ RETC အား အထောက်အပံ့ပြုနိုင်မည့် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖေါ်ရေး၊ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများကို အခြေပြုလျှက် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုရေး၊ နယ်စပ်ဧရိယာ သစ်တော ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆွေးနွေးရာ၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ စတင်ပြီး သစ်တောကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစီမံကိန်း (AKECOP) ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား သစ်တောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်းများ (AFoCo) အထောက်အပံ့ဖြင့် သစ်တောများပြန်လည်တည်ထောင်ရေး၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တောအတန်းအစားကျဆင်းခြင်းမှ ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုလျှော့ချခြင်း (REDD+) နှင့် ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင်လည်း REDD+ လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း၊ သစ်တောသစ်ပင်များသည် သစ်နှင့် သစ်မဟုတ်သော သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ပေးရုံသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပံပိုးပေးလျှက်ရှိရာ ကျေးလက်ဒေသနေပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေးအတွက် အလွန်အထောက်အပံ့ပြုလျှက်ရှိကြောင်း၊ သစ်တောစိုက်ခင်းများတည်ထောင်ခြင်း၊ ဒေသခံအစု အဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းများ တည်ထောင်ခြင်းနှင့် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို အကြောင်းပြု၍ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ အထောက်အကူပြုနိုင်ကြောင်း၊ အငြင်းပွားမှုများ လျော့ပါးပျောက်ကွယ်နိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး သစ်တောအစပြုခြင်း (Peace Forest Initiative -PFI) လုပ်ငန်းများကို စတင်ဆောင်ရွက်နေကြေကြောင်း၊ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှ အဆိုပြုသော အာဆီယံ-ကိုရီးယား အထိမ်းအမှတ် သစ်တောဉယျာဉ် တည်ထောင်ရေးကိုလည်း ကြိုဆိုပါကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် အာရှသစ်တောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO) ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောဉီးစီးဌာနက အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်မည့် ကျွန်းစိုက်ခင်းတွင် ကျရောက်သော ပိုးမွှာများကာကွယ်နှိမ်နင်းခြင်း သုတေသနစီမံကိန်း၊ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောအင်တာပရိုက်များ အခြေပြုစံပြသစ်တောများ တည်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစီမံကိန်းများနှင့် တောမီးထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနစီမံကိန်းများစတင်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၍ ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အာရှသစ်တောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (Asian Forest Cooperation Organization - AFoCO) ၏ ဝန်ကြီးအဆင့် အစည်းအဝေးသို့ အဖွဲ့ဝင် (၁၄) နိုင်ငံမှဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး အာဆီယံ-ကိုရီးယားအဆင့်မြင့် အရာရှိကြီးများ ဆွေးနွေးပွဲသို့ ကိုရီးယားနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ဝန်ကြီးများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသည် ခရီးစဉ်အတွင်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့တွင် ကိုရီးယားအမျိုးသားသစ်မျိုးစုံဥယျာဉ် (Korea National Aboretum – KNA)သို့ သွားရောက်၍ ပန်းပုံစံပြတိုက်၊ မျိုးစေ့ဘဏ်၊ အပူပိုင်းဒေသနှင့် သမပိုင်းဒေသတွင် ပေါက်ရောက်သည့် သစ်မျိုးများအား မှန်လုံအိမ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမှုပြကွက်၊ သစ်မျိုးစုံဥယျာဉ် အတွင်းလှည့်လည် ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် Korea Furniture Museum လေ့လာကြည့်ရှုခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။